ဥပဒေအကြံပေးရေးဦးစီးဌာန | Union Attorney General’s Office Skip to main content
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဥပဒေတို့အရ ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံးသည် ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်မခွဲ၂(ဋ)အရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ ဒေသဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် နိုင်ငံအချင်းချင်း ဆိုင်ရာ စာချုပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်မခွဲ(ဌ) အရ နားလည်မှုစာချွန်လွှာများ၊ သဘော တူညီချက်မှတ်တမ်းများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများအား ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ အဆိုပါရှေ့နေချုပ်၏ တာဝန်ဝတ္တရား များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၊ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေး ဦးစီးဌာနကို ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် နည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ ၄၁ အရ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးဦးစီးဌာနကို အောက်ပါဌာနခွဲများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်- (က) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေ နှင့် အာဆီယံဥပဒေရေးရာဌာနခွဲ၊
(ဂ) အထွေထွေ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးဌာနခွဲ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ နှင့် အာဆီယံရေးရာဌာနခွဲ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် အာဆီယံရေးရာဌာနခွဲကို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ၄၂(က)အရ ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဤဌာနကို ဌာန၂၊ဌာနခွဲ(၄)အဖြစ် ဖွဲ့စည်းသတ်မှတ်ထား ပါသည်။ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရသည့် စာချုပ်အမျိုးအစားများ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် အာဆီယံဥပဒေရေးရာဌာနခွဲသည် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် နည်းဥပဒေ များ၊ နည်းဥပဒေ ၄၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါ စာချုပ်စာတမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဥပဒေချုပ်ရုံးက ဥပဒေအကြံဉာဏ်တောင်းခံသည့်အခါ စိစစ်ပြီး ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရပါသည်-
(က) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် နိုင်ငံ ချင်းချင်းဆိုင်ရာ စာချုပ် စာတမ်းများ၊
(ခ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရုံးဖွင့်လှစ်ခြင်းဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများ၊ (ဂ) လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(ဃ) နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ရေး၊ နယ်ခြားဒေသ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်း များ၊
(င) နှစ်နိုင်ငံလေကြောင်းပျံသန်းရေး၊ ရေကြောင်းသွားလာရေး၊ ကုန်လမ်းပို့ဆောင်ရေးစာချုပ်စာတမ်းများ
(စ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ စာချုပ်တမ်းများ၊
(ဆ) မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီးနှိမ်နှင်းရေးဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်း၊
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများက နည်းပညာ၊ ငွေရေးကြေးရေး အကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(ဈ) ပြည်ပနိုင်ငံများမှ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းက အထောက်အပံ့ပေးသည့် စာချုပ်စာတမ်း များ၊ (ည) နှစ်နိုင်ငံအကြား ချုပ်ဆိုမည့်ကုန်သွယ်မှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှု နှင့် အခြားသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်း များ၊
(ဋ) စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းရှိသည့် သဘောတူစာချုပ်များ၊ နားလည်မှုစာချွန်လွှာများ၊ ဆွေးနွေးမှု မှတ်တမ်းများ၊ သဘောတူညီမှု မှတ်တမ်းများများ၊ အထောက်အပံ့ စီမံကိန်းများနှင့် အခြား စာချုပ်စာတမ်းများ၊
(ဌ) နည်းဥပဒေခွဲ(က) မှ (ဋ) အထိ ပါ စာချုပ်စာတမ်းများ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ စာချုပ်စာတမ်းများကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ ရပ်စဲခြင်း ဆိုင်ရာစာချုပ်များ၊
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများတွင်ပါဝင်ရန် သင့် မသင့် ဥပဒေ အကြံဉာဏ် ပေးခြင်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့် ဒေသဆိုင်ရာစာချုပ်စာတမ်းများတွင် ပါဝင်ရန် သင့် မသင့် ဥပဒေအကြံပြုချက် တောင်းခံသည့်အခါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေ နှင့် အာဆီယံဥပဒေ ရေးရာဌာနခွဲသည် ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်၊ နည်းဥပဒေ ၄၂ အရ အောက်ပါအချက်များကို အခြေခံစိစစ် ရပါသည်-
(က) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် အင်္ဂါရပ်များဖြစ်သည့် စာချုပ်ဝင်များ၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ အမျိုးအစား၊ လုပ်ငန်းစဉ်၊ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း၊ စာချုပ်၏ဝိသေသလက္ခဏာ၊ စာချုပ်ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့် ပျက်ပျယ်ခြင်း၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ ပြန်လည် အတည်ပြုခြင်းနှင့် စာချုပ်ပြန်လည် ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများ၊
(ခ) စာချုပ်တွင်ပါဝင်ခြင်းဖြင့်မည်သည့် အချိန်တွင် စတင်အသက်ဝင်မည် ဖြစ်ခြင်း၊
(ဂ) စာချုပ်ကိုခြွင်းချက်ပြုခြင်း၊ အတည်ပြုပါဝင်ကြောင်း၊ အကြောင်းကြားခြင်း၊ စာချုပ်အပ်နှံခြင်း နှင့် ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း နည်းလမ်းများ၊
(ဃ) စာချုပ်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် နည်းလမ်းများ နှင့် စာချုပ်မှ နုတ်ထွက် နိုင်သည့် နည်းလမ်းများ၊
(င) အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းခြင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ၊
စာချုပ်စာတမ်းများစိစစ်ရာတွင် အဓိကထား စိစစ်ရသည့်အချက်များ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် အာဆီယံဥပဒေရေးရာဌာနခွဲသည် ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်နည်းဥပဒေ များ၊ နည်းဥပဒေ ၄၃ အရ စာချုပ်စာတမ်းများစိစစ်ရာတွင် အောက်ပါ အချက်များကို အဓိကအားဖြင့် အခြေခံ ၍ စိစစ်ရပါသည်-
(က) စာချုပ်ဝင် ပါဝင်ခြင်း နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါးနိုင်ခြင်း ရှိ မရှိ၊
(ခ) စာချုပ်ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် နိုင်ငံတော်၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ တည်ဆဲဥပဒေများ နှင့် ဆန့်ကျင်မှု ရှိ မရှိ၊
(ဂ) စာချုပ်တွင်ပါဝင်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်နှင့် အများပြည်သူတို့အတွက် အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်ထွန်း ဖွယ်ရာ ရှိ မရှိ၊
(ဃ) စာချုပ်တွင် ပါဝင်ခြင်းကို အကြောင်းပြု၍ နိုင်ငံတော်၏ တည်ဆဲဥပဒေများကို ပြင်ဆင်ရန် သော်လည်းကောင်း၊ ဥပဒေအသစ်ပြဋ္ဌာန်းရန် သော်လည်းကောင်း လိုအပ်ခြင်း ရှိ မရှိ
(င) စာချုပ်တွင်ပါဝင်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်ကဆောင်ရွက်ပေးရမည့် စီမံခန့်ခွဲရေး ဆိုင်ရာ တာဝန်များ ရှိ မရှိ၊
(စ) စာချုပ်တွင်ပါဝင်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်အပေါ် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ဝန်ထုပ် ဝန်းပိုးဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာ ရှိ မရှိ၊
(ဆ) နှစ်နိုင်ငံ တန်းတူ ရည်တူရှိမှုအပေါ် အခြေခံထားခြင်း ရှိ မရှိ၊
(ဇ) နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးနှင့်အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဦးတည်ထားခြင်း ရှိ မရှိ၊
(ဈ) မြန်မာနိုင်ငံသို့ပေးအပ်မည့် ကျွမ်းကျင်မှုအကူအညီ နှင့် အထောက်အပံ့ များသည် အနှောင်အဖွဲ့ များပါရှိခြင်း ရှိ မရှိ၊
(ည) စာချုပ်တွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်တွင် အခြားတာဝန်များ တင်ရှိလာနိုင် ခြင်း ရှိ မရှိ၊
(ဋ) စာချုပ်တွင်ပါဝင်ခြင်းမပြုမီ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက် ရယူရန် လိုအပ်ခြင်း ရှိ မရှိ၊
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ ၄၅ အရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ နှင့် အာဆီယံ ဥပဒေရေးရာဌာနခွဲသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများကို စိစစ်ပြီး နည်းဥပဒေ ၄၃ အရ ဥပဒေ အကြံဉာဏ်ပေးရာတွင်-
(က) နိုင်ငံတော်အတွက် ထိခိုက်နစ်နာနိုင်သည့် အချက်များကို တွေ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းက သိရှိသတိမူနိုင်ရန် ထောက်ပြ အကြံပြုရပါသည်။
(ခ) ဥပဒေကြောင်းအရ သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်များ၊ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရန်၊ ပယ်ဖျက်ရန် လိုအပ်သည့် အချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့က ပြန်လည် စိစစ်သုံးသပ် သင့်သည့်အချက်များ၊ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ၊ သတိပြုသင့်သည့် အချက်များကို ထည့်သွင်းဖော်ပြ၍ အကြံပြုရပါသည်။
(ဂ) ချုပ်ဆိုပြီးသော စာချုပ်မိတ္တူများကို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းထံ တောင်းခံပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားရှိရပါသည်။
(ဃ) သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းက ပေးပို့သော စာချုပ်မိတ္တူများကို ရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ အကြံပြုချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထားမှု ရှိ မရှိ၊ လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်အရ ပြင်ဆင်ချုပ်ဆိုထား သည့်အချက်များ ပါမပါ စိစစ်ပြီး တွေ့ရှိချက်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားရပါသည်။ လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန အဖွဲ့အစည်းသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားပါသည်။
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ ၄၅ အရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် အာဆီယံ ဥပဒေရေးရာဌာနခွဲသည် အောက်ဖော်ပြပါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ဥပဒေရေးရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့တို့က အကူအညီတောင်းခံသည့်အခါတွင် လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်က တာဝန်ပေးအပ်သည့်အခါတွင် လည်းကောင်း၊ အောက်ဖော်ပြပါ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ရပါသည်-
(က) ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ် နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးများ တက် ရောက်ခြင်း၊ နိုင်ငံတော်ကိုယ်စားဆွေးနွေးခြင်း၊ စာမ်းဖတ်ခြင်း၊ ဥပဒေရေးရာ စိစစ်မှုများပြုလုပ်ခြင်း၊
(ခ) ဒေသဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများ ရေးသားပြုစုရာတွင် နိုင်ငံတော်ကိုယ်စား ပါဝင် ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဂ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး၊ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ခုံရုံးများတွင် နိုင်ငံတော်က ဖြေရှင်းရန်တာဝန်ရှိသည့်ကိစ္စများ၌ အကြံပေးခြင်း၊ ပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) နိုင်ငံတော်က အတည်ပြုပါဝင်ထားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ ဒေသဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် နိုင်ငံ အချင်ချင်းဆိုင်ရာ စာချုပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်၏ တာဝန်ရှိမှုအရ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည့် နိုင်ငံတော်အဆင့် အစီရင်ခံစာများတွင် ဥပဒေရှုထောင့်မှ ပါဝင် ဆွေးနွေးခြင်း၊ အကြံပေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(င) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေရေးရာများ နှင့် စပ်လျဉ်း၍အခြားဌာနဆိုင်ရာများ နှင့် ဆက်စပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စ) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေရေးရာ များ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေအထောက်အကူပြု ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဆ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ ဒေသဆိုင်ရာစာချုပ်များ ချုပ်ဆိုရန်အတွက် အကြိုညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲများ တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဇ) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်၊ ဒုတိယရှေ့နေချုပ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် အခြား တာဝန် ပေးအပ် ခြင်းခံရသူတို့က အခြားတာဝန်တစ်ရပ်အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ရေးရာကိစ္စများတွင် ပါဝင် အထောက်အကူပြုခြင်း စသည်တို့ လုပ်ဆောင်ရပါသည်။
ဤဌာနခွဲသည် စီးပွားရေးစာချုပ်စာတမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသော ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲများတွင် တက်ရောက်ဆွေးနွေးပေးရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနကဖိတ်ကြားလျှင် ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ပြီး ဥပဒေကြောင်းအရ အကြံပြုဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြည်ထောင်စု အဆင့်အဖွဲ့အစည်း၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးများက ဥပဒေ အကြံဉာဏ်တောင်းခံသည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့်တစ်ဖက် စာချုပ်ဝင်တို့အကြား အပြီးသတ် နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းသဘောတူထားသော အောက်ပါ စီးပွားရေးစာချုပ်စာတမ်းများ သို့မဟုတ် သဘောတူညီချက်များအပေါ် ဥပဒေ အကြံပေးပါသည်။
တည်ဆောက်၊ လုပ်ကိုင်၊ လွှဲပြောင်းသည့်စာချုပ်များ
ရေနံ၊ သဘာဝဓါတ်ငွေ့နှင့် ဓါတ်သတ္တုရှာဖွေတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ စာချုပ်များ
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စာချွန်လွှာများ၊ နားလည်မှုမှတ်တမ်းများ
အထွေထွေဥပဒေအကြံဥာဏ်ပေးရေးဌာနခွဲ အထွေထွေ ဥပဒေအကြံဥာဏ်ပေးရေးဌာနခွဲသည် အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို အကြံပေးပါသည်-
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂(ဂ)၊ နည်းဥပဒေ ၅၃၊ ၅၄၊ ၅၅၊ ၅၆၊ ၅၇၊ ၅၈ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ တရားစွဲမတင်မီ ဥပဒေအကြံဥာဏ်ပေးခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိသော ကိစ္စရပ်များကိုသာ စိစစ်အကြံဥာဏ်ပေးခြင်း၊
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် နည်းဥပဒေ ၅၃(က)နှင့်အညီ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ဥက္ကဌ (သို့မဟုတ်) အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဌ၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၊ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးဌာနတစ်ခုခု (သို့မဟုတ်) ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့က ဥပဒေ အကြံဥာဏ် တောင်းခံသော ကိစ္စရပ်များကိုသာ စိစစ်အကြံဥာဏ်ပေးခြင်း၊
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နည်းဥပဒေ ၅၃(ခ)အရ တိုင်းဒေသကြီး(သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးက လမ်းညွှန်မှု တောင်းခံလာသော ကိစ္စရပ်များကို စိစစ်အကြံဥာဏ်ပေး ခြင်း၊
697528Since: 08/01/2013 - 19:50 Copyright © 2013 - 2017 Union Attorney General’s Office. All rights reserved. Powered by : Information Matrix